ညီလင်းသစ်: မွန်းတည့်ချိန်၏သွားများ (၂)
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.9.08
ရုံးမသွားခင်လေး ၀င်လာပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ခံစားသွားပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ မျက်စိအေးပါ့။
ကိုညီလင်းသစ်က ဓါတ်ပုံကို ခံစားတတ်တာပဲ။
Thanks u ပါ။
နန္ဒာ့ Blog က ''သူနဲ့အတူတူ'' ပုံလေးက သူငယ်ချင်း Tom ရိုက်ပေးတာ။ ရိုက်လိုက် မှန်းတောင် မသိဘူး။ သူက တော်တော်လှမ်းလှမ်း နေရာ ရောက်နေတာလေ။
အပျော်တမ်း ရိုက်ပေမယ့် ခံစားချက်နဲ့ ရိုက်လို့ သူ့ပုံတွေ သိပ်ကောင်းတယ်။
ဒီ Post လေးက Interesting ပဲ။ Travelling ဝါသနာပါသူ နန္ဒာ့ အတွက် အကြိုက်ပါပဲ။
ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေလဲ Brilliant!! Good Snaps.
Cbox မှာ Message ချန်တာ မရလို့ Comment မှာ ထပ်ရေးလိုက်တယ်။ Swiss မှာနေတာလား??
I take it you can speak French then, huh?
နန္ဒာလဲ Switzerland ကို July တုန်းက summer holiday အဖြစ် 3rd times ရောက်ဖြစ်တယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့တာ အများကြီးပဲ။ Post တင်ဖြစ်ရင် လာပြောမယ်။
I love swiss culture and living standard. Everywhere is great to look at and very clean. But not been to village yet which i could do next time.
Please post about swiss and your experiences sometime if you could. It would be interesting to read for sure.
ဟုတ်ပါတယ် နန္ဒာ...Swiss အကြောင်းရေးဖို့စဉ်းစား ထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်၊ အဆင်ပြေသလို ရေးဖြစ် မှာပါ၊
နန္ဒာက Swiss ကို ၃ ခေါက်တောင်ရောက်ဖူးတယ်ဆို တော့ ဘယ်ဖက်တွေများပါလိမ့်၊ Swiss German အပိုင်းလား၊ Swiss Romande အပိုင်းလား၊
အဲ့ရွာလေးမှာ နေချင်တယ်.. :(
အလွတ်ရပေမယ့်လည်း အဆုံးထိတော့ မရေးတော့ပါဘူးနော်။
တောင်တန်းကြီးတွေကိုကြည့်ရင်း ရှေ့ဆက်လှမ်းဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အစ်ကို့ရဲ့ စကားလေးကြောင့် ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ကဗျာလေး ချရေးသွားတာ။
ဇွန်စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း ရွတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းမိတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။း)